Maamulka gobolka Banaadir oo muddo 5 bilood ah maraya 3 afhayeen – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Maamulka gobolka Banaadir oo muddo 5 bilood ah maraya 3 afhayeen
Mareeg.com: Gudoomiyaha gobolka Banaadir, ahna duqa Muqdisho, Xasan Maxamed Xuseen Muungaab ayaa xilka ka qaaday afhayeenkii gobolka Banaadir, Axmed Cusmaan Muxudiin “Axmed Showqi”, wuxuuna xilkaas u magacaabay mas’uul kale.
Wareegto ka soo baxday Xafiiska Muungaab, kuna taariikheysneyd 17/07/2014 ayaa xilka loo qaaday afhayeenkii hore, waxaana Cali Maxamuud Faarax “Cali Seeko” loogu magacaabay inuu noqdo Afhayeenka Cusub ee maamulka Gobolka Banaadir.
Sida lagu cadeeyey wareegtadan kasoo baxday xafiiska duqa magaalada Muqdisho ayaa lagu sheegay ujeeddada laga leeyahay ay tahay baahida loo qabo dardar gelinta howlaha warfaafinta maamulka gobolka Banaadir iyo waayo aragnimada shaqo ee mas’uulka xilkan loo magacaabay ee kor ku xusan.
Cali Maxamuud Faarax “Cali Seeko” ayaa horey uga soo mid noqday Baarlamaankii Dowladdii KMG ee uu Madaxweyne ka ahaa Sheekh Shariif Sheekh Axmed.
Waa afhayeenkii 2-aad ee gudoomiye Muungaab u magacaabo maamulka gobolka Banaadir, tan iyo markii uu xilkaas qabtay bishii Febaraayo ee sanadkaan 2014.
Bishii May ee lasoo dhaafay ayaa waxaa is casilay afhayeenkii maamulka gobolka Banaadir, C/baasid Maxamed C/raxmaan, waxaana lagu badelay Axmed Cusmaan Muxudiin “Axmed Showqi”, kaasoo isna haatan xilka laga qaaday.